Sahiran-tsaina Momba Ny Adin’ny Mapuche Ao Shily? Afaka Manampy Anao Ity Sarimiaina Ity · Global Voices teny Malagasy
Sahiran-tsaina Momba Ny Adin'ny Mapuche Ao Shily? Afaka Manampy Anao Ity Sarimiaina Ity
Voadika ny 18 Mey 2016 4:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Español, English
“Rariny, fankasitrahana sy fanajana” no anisan'ny fitakian'ny vahoaka Mapuche sy ny fototry ny tolon'izy ireo ao Shily. Pikantsary avy amin'ny sarimiaina fohy “Vahaolana 10 ahatakarana ny Adin'ny Mapuche,” hita ao amin'ny Vimeo.
Mbola ho ela vao ho tafala ao anatin'ny pejin'ny tantara ny ady eo amin'ny manampahefana Shiliana sy ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany Mapuche. Nahitana hetsi-panoheran'ny vahoaka Mapuche sy herisetra marobe tao anatin'izay volana vitsivitsy izay.
Sarotra ny olana, ary na dia efa am-polony taona maro ela aza, mbola marobe ao anatiny sy ivelan'i Shily ny tsy fahazoan-kevitra momba ny tolona Mapuche miaro ny zo hanan-tany, ny rariny sy ny fanajana. Araka ny fanazavan'i Luis Campos Muñoz ao amin'ny NACLA, gazetiboky ho an'ny vaovao sy fanadihadiana momba an'i Amerika Latina:
Nahitana ady teo amin'ny vahoaka indizeny ao Shily tao anatin'izay roapolo taona izay, indrindra teo amin'ny vondrona indizeny betsaka indrindra ao amin'ny firenena, sy ireo governemanta Shiliana nifandimby noho ny resaka fampandrosoana sy zo momba ny fananan-tany. Ny fananganana ny tsy fahalalana mieli-patrana eny ifotony ary koa ny fisian'ny adin'ny Mapuche ao amin'ny firenena dia nampiasa ny fanalefaham-pitenenana “fifampiresahana” sy “fampandrosoana” mba hanakonana ny dingana famindra-toerana ireo vondrom-piarahamonina indizeny noho ny fanorenana tohodrano sy lalambe.
Mampiseho mazava ny fototry ny ady sy ireo tena fitakian'ny vahoaka Mapuche ny sarimiaina amin'ny teny Espaniola ao amin'ny Vimeo, nosoratan'i Hector Errázuriz sy María Pía Manquemilla ary novokarin'ny Colectivo Saltamontes tamin'ny taona 2013.
Na dia navoaka telo taona lasa aza izay, mbola ilaina amin'ny fanazavany fohy momba ny tantara ambadiky ny ady ny sarimihetsika. Mba hanomezana fanazavana bebe kokoa momba ny fototry ny ady, nanatontosa lahatsary, azo jerena ao amin'ny Vimeo i Errazuriz Manquemilla izay ahitana hevi-dehibe 10 mba hahatakarana ny tantaran'ny ady:
Notontosaina tamin'ny fiandohan'ny tolona tamin'ny taona 1880 ny lahatsary:
Nanomboka tamin'ilay antsoina hoe Fampandrian-tany tao Araucania izany. Nahazo ny Avaratra Lehibe i Shily. Avy eo tonga hatrany atsimo, izay voafetra hatreo amin'ny renirano Bio Bio. Izany no mahatonga ity faritra ity sokajiana toy ny “sisintany” […] Nonina tao atsimon'i Bio Bio ny mponina Mapuche. Taorian'ny taona maron'ny fifanarahana, samy nanana ny fonenany ny Mapuche sy ny Espaniola.
Tamin'izany fotoana izany, nonina tamin'ny tany midadasika fiompiana biby sy fanaovana varotra niaraka indrindra tamin'i Arzantina ny vahoaka Mapuche. Saingy avy eo tonga ny “fampandrian-tany”, hetsika “diso anarana” satria, araka ny filazan'ny mpitantara ao amin'ny lahatsary, vono olona tao amin'ny faritra Araucania no tena zava-misy tamin'izany. Nandritra izany fotoana izany, nalaina tamin'ny alalan'ny famitahana, ny toaka sy ny basy ny tanin'ny Mapuches. Amin'ny minitra 1:34, mipoitra ao amin'ny lahatsary ny lisitr'ireo mpanoratra, izay tsara hovakianao raha te hanitatra ny fahalalanao momba ny tantara ianao.
Taorian'izany, nomena sombin-tany hafa ny vahoaka Mapuche:
Rehefa nalaina ny tany, nomena faritra kely antsoina hoe “reductions” (fanalefahana) ny vondrom-piarahamonina Mapuche. […] Ankoatra ny tany efa kely, mbola ratsy kalitao ihany koa izany.
Araka izany, nomena ireo voanjo Eoropeana maniry hoavy ao Shily ny ambin'ny tany mamokatra. “Izany rehetra izany no miverina,” hoy ny lahatsary. Noho izany, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, niomana hitaky ny zon'izy ireo sy hitaky onitra ny vahoaka Mapuche. Ary ireto no antony:
Ny fiainana ao amin'ny “reductions” dia midika fahantrana, fanalam-baraka, herisetra. Tsy tantsaha mahantra foana akory ny Mapuche […] Noho izany antony izany, niloa-bava ireo antoko politika sy parlemantera Mapuche.
Tamin'ny governemantan'i Salvador Allende tamin'ny fiandohan'ny taona 1970, nanomboka toa azo atao ny fanonerana, saingy tapaka tampoka noho ny fanonganam-panjakana notarihin'i Augusto Pinochet izany. Taona maro taty aoriana, taorian'ny fitondrana jadona, naverina nodinihana indray ireo drafitra ireo:
Tamin'ny fiverenan'ny demokrasia, niova ny zavatra sasany, saingy tsy nisy fiovana kosa ny hafa mikasika ny ara-tsaranga sy ny fanavakavahana.
Tapitra amin'ny fotoana ankehitriny ny lahatsary, ary milaza fa tsy voatery hisy fankahalana ao Shily, eo amin'ny manampahefana sy ny vahoaka Mapuche. Manana tantara tahaka izany miaraka amin'ny vahoaka indizeny ihany koa ny firenena tahaka an'i Kanada, Finilandy sy New Zealand, ka mifankasitraka sy mifanaja toy ny firenena maro-kolontsaina izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany ihany, manipika ny maha zava-dehibe ny fahatakarana ny fahasamihafana sy ny fahasarotana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Mapuche mihitsy ny lahatsary:
Misy ny tantsaha, mpihira, poety, mpahay toekarena, mpanao mofo, mpivarotra, mpisolovava Mapuche. Misy ny hevitra, fomba fijery samy hafa momba ny zavatra iriantsika amin'ny hoavy. Samihafa ny lalan'ny vahoaka Mapuche. Saingy mahafantatra tsara ny maha-Mapuche tafaray tamin'ny alalan'ny faniriana ho an'ny rariny, fankasitrahana, ny fanajana, ny fitovian-jo sy ny hasina ny rehetra.